रमेश खरेलको क्रन्दन फेरि किन? | नेपाली पब्लिक रमेश खरेलको क्रन्दन फेरि किन? | नेपाली पब्लिक
रमेश खरेलको क्रन्दन फेरि किन?
चर्चा बटुल्ने अस्त्र कि पद नपाएको झोक
सुरज खनाल २०७५, ३ फाल्गुन शुक्रबार ०८:५०
काठमाडौं, ३ माघ – प्रसंग सुरु गरौँ, करिव ५ वर्षअघि (२०७१ वैशाख १ गते) को एउटा पाठक प्रतिक्रियाबाट, कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको त्यो पाठक प्रतिक्रियामा मैले लेखेको थिएँ –गृहमन्त्री वामदेव गौतमले एसएसपी रमेश खरेलको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति एकदम सही लाग्यो। खरेल सेलिब्रेटी (प्रचारमुखी) बन्न चाहेको कुरा एकदम सही हो, ठोकुवा गर्छु खरेल प्रचारमुखी हुन् भन्ने आधार धेरै छन्। पहिले खरेलले गरेको कामको चर्चा हुन्थ्यो, तर अहिले उनी चर्चामा आउनका लागि काम गर्छन्, योजनाबद्ध रुपमा। यसका पनि कारण होलान्, केलाउन जरुरी छ।
हो, खरेल होनहार प्रहरी हुन्। सबैले भन्छन्, म पनि मान्छु। तर के खरेलबाहेक नेपाल प्रहरीमा अरु कोही होनाहार अफिसर नै छैनन्? अरु कुनै प्रहरी अफिसरले गुण्डा तह लगाउनै सकेका छैनन्? खरेलबाहेक सबै घुसखोर हुन्? के अरुले शान्ति सुरक्षा ल्याउनै सकेका छैनन्? अरु सबै प्रहरी अफिसर बेइमान नै छन् त? पक्कै नेपाल प्रहरीमा अरु पनि होनाहार, काविल, सक्षम, दुरदर्शी अफिसर छन्। जो आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा एकदमै राम्रो काम गरिरहेका छन्। कार्यक्षेत्र सुरक्षाको मजबुतीका लागि अहोरात्र खटिरहेका छन्। खोई त उनीहरुको चर्चा भएको?
अन्त्यमा, कसैको यति चर्चा नहोस्, उसले आफैलाई सर्वेसर्वा ठानोस्। र कसैलाई यति पनि उपेक्षा नगरियोस् की उनीहरुको उर्जा मरेर जाओस्। खरेलले एउटा प्रहरीले गर्नुपर्ने काम नै गरिरहेका छन्। र, त्यो काम अरु पनि धेरै प्रहरी अफिसरहरुले गरिरहेका छन्। फरक यतिमात्र हो कि सबको आ–आफ्नै शैली छ।
यो पाठक प्रतिक्रिया प्रकाशित हुँदा खरेल महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख थिए। त्यतिबेला उनको तत्कालिन गृहमन्त्री वामदेव गौतमसँग गतिलै चर्काचर्की परिरहेको थियो। हुन त म गौतमलाई सफल वा कुशल गृहमन्त्री मान्दिनँ। तर त्यस समय खरेलको विषयमा गौतमले दिएको ‘रमेश खरेल सेलीब्रेटी बन्न खोजे’ भन्ने अभिव्यक्ति वास्तविक लागेर यो प्रतिक्रिया लेखेको थिए। सोही दिन उनले मेरा एकजना पत्रकार मित्र जियालाल साहलाई फोन गरेर ‘यो सुरज खनाल भन्ने को हो?’ भनेर सोधेका थिए रे। यसबारे मलाई साहले नै जानकारी दिएका थिए।
खरेलको विषयमा यो मेरो तेस्रो टिप्पणी हो। राजीनामा दिएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा २०७५ फागुन १ गते एउटा मिडियामार्फत खरेलले मुख खोले। जहाँ उनले आफू प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हुन नपाएको कुण्ठा पोख्दै भनेका छन्, ‘सत्तासीनहरुले लाद्न चाहेको अन्यायलाई मैले आफ्ना हकमा सामाजिक जीवनको फरक आयामतर्फ जाने अवसरमा बदल्न चाहेँ।’
रमेश खरेल साँच्चै राम्रा प्रहरी अफिसर थिए। त्यतिबेला मलाई नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सर्वेन्द्र खनाल र खरेलमध्ये एक जना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो। २९ वर्ष संगठनका लागि व्यतित गरेका उनी साँच्चै जनमुखी छन् भन्ने लाग्थ्यो। तर, आईजीपी हुन नपाएको झोकमा उनले जुन शैलीमा प्रहरीको बर्दी लत्याए, त्यसले उनी ‘जनमुखी’ होइन, ‘पदमुखी’ प्रहरी अफिसर थिए भन्ने प्रमाणित गर्यो। जनताको हितमा काम गर्नका लागि आईजीपी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन।
उनले राजीनामा दिए, यो उनको व्यक्तिगत विषय थियो। २९ वर्षसम्म बोकेर हिँडेको आईजीपी हुने सपना पूरा नहुँदा मनखत लाग्नु स्वाभाविक हो। तर, ‘मै हुँ, म बाहेक कोही होइन’ भन्ने शैलीमा आएको ‘गरिमाको सट्टा अर्थोकको लेखाजोखा राख्ने सिकाईमा म कहिल्यै जान सकिनँ।… यसमा चलखेलका गणितले काम गर्ने होला। त्यसको एकदमै कम जानकारी छ मसँग।’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले उनलाई आईजीपी हुन नदिनका लागि राज्यसत्ता नै उनको विपक्षमा लागेको भन्ने दर्शाउछ।
खरेलले खोर्इ कसलार्इ हो एउटा आरोप पनि लगाएका छन्, ‘म २७ वर्ष आफ्नो व्याचमा १ नम्बर रहेँ। हठात् २ नम्बरमा झारिएँ।’ यसको अर्थ के? २७ वर्षसम्म १ नम्बर भएको व्यक्ति २ नम्बर कहिल्यै हुनै सक्दैन भन्ने हो कि उनी डीआईजी हुँदा छलकपट गरेर २ नम्बरमा पारियो भन्ने हो? अलि प्रष्ट बुझ्न सकिएन। २७ वर्ष १ नम्बरमा रहेको व्यक्ति २ नम्बर हुनै सक्दैन भन्ने हो भने चाहिँ मलाई तपाईको बौद्धिकतामाथि नै दया लाग्नेछ। हैन, छलकपट नै गरेर तपाईलाई २ नम्बरमा झारिएको भन्ने तपाईको बुझाई हो भने, ‘सत्य बोल्दा अहिले अप्ठ्यारो पर्ला, तर जीवन सुखी त्यसबाटै हुन्छ,’ भन्ने दर्शन छाट्ने तपाई त्यतिबेला किन बोल्नुभएन? किन भन्नुभएन कि, ममाथि राज्यसत्ताले अन्याय गर्‍याे, मेरो ठाउँमा सर्वेन्द्र खनाललाई १ नम्बर बनायो। अहिले आएर यो क्रन्दन किन? जनताको भावनात्मक संवेदना बटुल्न? रमेश खरेलज्यू, यो त आफ्नै बुद्धि भ्रष्ट भएर सत्ताच्यूत भएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको शैलीजस्तै भएन र?’